बलिउड : प्रभासको ‘साहो’ ले बक्स अफिसमा गर्यो कमाल, दोस्रो दिन यती कमाइ ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १५ भाद्र आईतवार १७:४४
बलिउड : प्रभासको ‘साहो’ ले बक्स अफिसमा गर्यो कमाल, दोस्रो दिन यती कमाइ !
एजेन्सी, काठमाडौं। प्रभासको ‘साहो’ ले बक्स अफिसमा राम्रै कमाइ गरेको छ । फिल्मले शनिबार मात्रै ५०–५५ करोड भारुको कमाई गरेको छ । यससँगै, साहोले देशभरी दुई दिनभित्रै १४० करोडको कलेक्सन गरेको छ ।
२४ करोड भारुबाट शानदार ओपनिङ गरेको साहोले रिलिजको दोस्रो दिन पनि दमदार प्रदर्शन गरेको छ । बक्स अफिस इन्डियाको वेबसाइट अनुसार ‘साहो’ ले शनिबार २३ करोड भारु कमाई गरेको छ ।
फिल्मको हिन्दी संस्करणले दुई दिनमा ४७ करोड भारुको कलेक्सन गरेको छ । फिल्ममा प्रभास र श्रद्धा कपुरको अभिनय रहेको छ । कमाई र प्रदर्शनको कुरा गर्ने हो भने यो फिल्म साउथको तेस्रो यस्तो डब गरिएको फिल्म हो जसले हिन्दी मार्केटमा सबभन्दा धेरै कमाईको रेकर्ड बनाएको छ ।
PREVIOUS Previous post: भोली हरितालिका तीज, प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाटै दिए शुभकामना !
NEXT Next post: पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको माइक्रो बस तनहुँको दुलेगौँडामा पल्टियो